Wararkii ugu dambeeyey Hogaamiyaasha Dawlad gobaleedyada oo ku sii qulqulaya Baydhabo, Yaase gaaray ilaa hadda? | PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL Wararkii ugu dambeeyey Hogaamiyaasha Dawlad gobaleedyada oo ku sii qulqulaya Baydhabo, Yaase gaaray ilaa hadda? – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
Home W.Gudaha Wararkii ugu dambeeyey Hogaamiyaasha Dawlad gobaleedyada oo ku sii qulqulaya Baydhabo, Yaase gaaray ilaa hadda?
Wararkii ugu dambeeyey Hogaamiyaasha Dawlad gobaleedyada oo ku sii qulqulaya Baydhabo, Yaase gaaray ilaa hadda?
BAYDHABO(P-TIMES)- Hogaamiyaasha dawlad gobaleedyada xubnaha ka ah dawladda Faderaalka ee Soomaaliya ayaa kusii qulqulaya magaalada Baydhabo, halkaas oo uu ka furmi doono shirka GEEDI SOCODKa Faderaalisimka ee Soomaaliya, kaas oo ay ka wada hadlayaan dawlad gobaleedyada.
Ammaanka magaalada Baydhabo ayaa aad loo adkeeyey, waxaana ciidamada AMISOM iyo kuwa Koonfur Galbeedba ay xireen inta badan jidadka magaalada, iyagoo baaraya gaadiidka iyo dadweynaha socdaalayaba.
Ilaa hadda madasha Baydhabo waxaa gaaray Madaxweynayaasha Hirshabeelle & Jubbaland, waxaana lafilayaa in ay goor dhaw ka dagaan Madaxda Puntland & Galmudug oo hadda ka hawada kusii jira.
Madaxweynaha Puntland oo kahor intii uusan ka dhoofin magaalada GAroowe la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay u tagayaan Baydhabo, shir muhiim u ah Hanaanka Faderaalisimka ee Soomaaliya, ayna tahay in laga wada qeyb noqdo.
Shirkan ayaa ah mid ay dhinacyadu uga wada hadlayaan khilaafka kala dhaxeeya dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, waxaana aan la garan Karin waxyaabaha ka soo bixi doona, xiligan uu ku soo beegmay waqti xasaasi ah.
Pablo on SIR LA OGAADAY: Wasiiradii ugu tunka weynaa xukuumadda Gaas oo maxkamadd kasoo hor muuqan doona ka hor doorashada & Xildhibaano iyaguna lagu dhagan yahay “Tolow Maxay Sameeyeen?”
adidas ultra boost uncaged on Natiijada wareegii labaad ee doorashada madaxweyne ku xigeenka Puntland oo lagu dhawaaqay & Loolankii oo gaadhay….
nike epic react flyknit on DAAWO:Musharax Gen. Shaale oo soo bandhigay qorshiisa wax qabadka ee xilka madaxtinimada P/land
yeezy boost on DEG-DEG+SAWIRRO: Wararkii ugu dambeeyay ee Qaraxa Muqdisho iyo Xildhibaan ku dhintay.
air max 90 on Madaxweynaha Turkiga oo si kuluul uga hor yimid qorshe uu waday Maraykanka